Location: musha » Kutumira » ushanyi » Ukraine 2019: Gore remhando yepamusoro & kugona mukushanya
Ukraine 2019: Gore remhando yepamusoro & kugona mukushanya
Sangano reNational Tourism Organisation reUkraine rinoda kuti vafambi vazive kuti yakavhurika yekushanya kumativi ese
National Tourism Organisation yeUkraine iri kupemberera 2019 nekutarisa nezve mhando mukushanya. Inoda kuti vafambi vazive kuti Ukraine yakavhurika kushanya pamativi ese: kushanya kwechikafu, eco-tourism, kushanya kwechando, kushanya kwegungwa, kushanya kwetsika, pamwe nezviitiko zveMICE nemitambo.
Ukraine inodada nekuve nyika huru mukati meEurope uye ingori maawa matatu kubva kune mazhinji makuru makuru. Chakanyanya kucherechedzwa ndeye Odessa opera iyo inoverengerwa seimwe yepamusoro 3 operas munyika uye Oleshky Sands - iro renje renje muEurope. Chikafu cheUkraine ndechimwe chezvakapfuma zvepasirese cuisine pasirese, uye ndiyo inodhura zvakanyanya kushanya kuenda kuEurope.
Pano, vashanyi vanogona kuwana nyika yakapfuma ine 7 UNESCO Heritage nzvimbo; madziva 20,000 11; 71,000 mamiriyoni mahekita esango; 100,000 500 nzizi nehova; pamusoro pe30,000 metres yemateru ane sinou; uye 23,000 makiromita emahombekombe uye nzvimbo dzekutandarira. Pamberi petactile kumberi, kune zviuru makumi matatu zvemakereke nemaparishi pamwe chete nemakiromita makumi maviri nematatu enjanji zvakangomirira kuongororwa.
Tourism ine yakakosha hurongwa hwekuita mukusimukira kwakasimba kweguta rega rega nenyika zvakazara. Pfungwa yekusimudzira uye kunaka mukushanya kwave kupindirana, nekuti kushanya kunoda nzira dzenguva refu uye kunoshandisa zvisikwa, nhoroondo, tsika, uye zvimwe zviwanikwa pasina izvo kufarira kunzvimbo yekushanya kwaizonyangarika.
National Tourism Organisation yeUkraine inonzwisisa kuti mhando inofanana nebasa uye nekudaro, inoshuvira kugara ichiita zvakanaka neruremekedzo kuvanhu uye nharaunda. Hunhu inyaya yetsika, uye izvi zvinoreva kufambira mberi nemhando, kusimba, mutoro wemagariro, pachena, uye pachena. Zvemagariro, tsika, hupfumi, uye ecological kusimudzira chikamu chemhando yekushanya uye, panguva imwecheteyo, vimbiso yekugara kwenguva refu kwechikamu. Kupfuura izvozvo, kuchengetedza ibasa rehunhu. Hunhu haugone kuvapo pasina tsika.
As Ukraine tourism inovavarira imwe yakanaka 2019 muchigadzirwa chayo chevashanyi, inoyedza kubata kushanya kubva pahunhu hwemaonero. Kunyange zvazvo zvinhu zvakadai sekutenga zvinhu zvinogona kudzorerwa kana kuchinjana, kugadzirisa chiitiko chakaipa mukushanyirwa hazvibviri.
Maonero ekutanga anoverengwa, uye nekudaro kune anoshanya, zvakakosha kuti uite zvese nemazvo kekutanga. Iyo nzira yekuve nechokwadi chemhando yepamusoro mukushanya inounza mabhenefiti kuguta rega rega nenyika yese, vagari varo, uye bhizinesi. Hunhu uye chishuwo chekukwana chinovandudza chifananidzo uye chinowedzera denderedzwa revafambidzani vekushanya izvo zvinozokwezva mari itsva. Idenderedzwa rebudiriro rinopa migove mikuru mukushanya, uye National Tourism Organisation yeUkraine iri kufora kuenda kuGore Nyowani nezvinangwa zvakanaka kudaro nesimba.
Tevera National Tourism Organisation yeUkraine Pa Facebook.
Europe MICE Sangano ushanyi Ukireni UNESCO
Jamaica Gurukota Rezvekushanya rakazvipira kune nyowani nyowani yekuchengetedza vashanyi uye chengetedzo
Vanomwe vakaurayiwa pabhawa rePlaya del Carmen munzvimbo ine mari shoma